June 2018 – Laliguransnews
विश्वकप फुटवलमा आज चार खेल हुँदैछन् । ईङ्ल्याण्ड र बेल्जियमबीच समुह जीको विजेताका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा समुह एचमा रहेको जापानले कम्तीमा बराबरीको नतिजाले प्रिक्वाटरफाइनलमा स्थान बनाउने छ । समुह एच अन्तरगतको खेलमा नेपाली समयअनुसार राती पौने ८ बजे जापान र पोल्याण्ड तथा सेनेगल र कोलम्बियाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समुह एचबाट पोल्याण्डको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना
तीन महिनामै काठमाडौँलाई हराभरा बनाउने कसम खाएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई स्थानीय सम्पदाप्रेमीले ‘घाास’ पुरस्कार दिएछन् । घाँस पुरस्कार उनको योग्यताको सोह्रै आना कदर हो । किनभने, मेयरसाबले रानीपोखरीलाई बहादुरीपूर्वक ‘चौर’मा परिणत गरिसकेका छन् । पुरस्कारस्वरुप पहिलो वर्षमै घाँस पायो, दोस्रो वर्षमा के टक्र्याउने मेयरज्यू ? Source: Kantipur Please follow and like us:
लमजुङ — पहिरोले बेंसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडक हिमाली जिल्ला मनाङ पुग्ने एकमात्र सडक हो । बुधबार राति सडकका ठाउँठाउँमा पहिरो गएपछि बिहीबार बिहानैदेखि उक्त ठाउँमा सवारी आवागमन ठप्प भएको स्थानीयले बताएका छन् । लमजुङ खण्डमा पर्ने विभिन्न ३ ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध बनेको हो । मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-३ अर्खलेबेंसी, ४ को काप्रेभीर र मनाङ सिमाना
अर्जेन्टिनालाई अझै गाह्रो
अर्जेन्टिनाका लागि सोमबार राति नाइजेरियाविरुद्धको खेल निकै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने यसले नै विश्वकप २०१८ मा उसको यात्रा निर्धारण गर्ने तय थियो । त्यसैले समूह ‘डी’ को यो खेल अगाडि अर्जेन्टिना निकै दबाबमा थियो । अर्जेन्टिनामाथि जित्नै पर्ने दबाब थियो। यो दबाब टिममा मात्र थिएन, सायद त्यो भन्दा पनि चर्को दबाब कप्तान लियोनल मेसीमाथि थियो। यस्तै परिस्थितिमा अर्जेन्टिनाले
अर्जेन्टिनामा पहिलोपटक पाइला राख्दा सुरेश केसी २४ वर्षका थिए । त्यो सन् १९९९ को कुरा हो । अहिले त्यहाँ स्थायी रूपमा बस्ने नेपालीको संख्या ५० पनि पुगेको छैन । त्यतिबेला कति थिए होलान् ? त्यसमाथि अर्जेन्टिना आर्थिक रूपमा सम्पन्न र अवसरको खानी पनि होइन । तर, केसीले अर्जेन्टिना नै किन रोजे त ? अनलाइन कुराकानीमा
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुन तस्करी माथिको जारी छानबिनमा उच्च तहका व्यक्तिहरु पनि आएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदले उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले छानबिन जारी रहेकाले यथासमयमा यसबारे विस्तृत जानकारी आउने सदनलाई अवगत गराएका हुन् । सुन तस्करीमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको संलग्नताबारे सांसद प्रेम
डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकको मर्म नै मर्ने गरी तोडमोड गरेर ल्याइए असार १५ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले पहिले जारी भएको अध्यादेशमा कुनै पनि परिवर्तन नगरी जस्ताको तस्तै जारी गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उक्त प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सुधार अभियानको मर्म नै मर्ने गरी तोडमोड
ब्राजिलको सहज जित, जर्मनी बाहिरियो
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी विश्वकप फुटबलबाट बाहिरिएको छ । साउथ कोरियाले ईन्जुरी समयमा गरेको दुई गोलसँगै जर्मनी विश्वकपको समुह चरणबाटै बाहिरिएको हो । साउथ कोरियाका किम युङ्ग गोनले ईन्जुरी समयको तेसो मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । ईन्जुरी समयकै छैठौं मिनेटमा सोन होन मिनले गोलकिपर विनाको जर्मनी पोष्टमा गोल गरेपछि डिफेण्डिङ च्याम्पियन लिग चरणका खेलमा
यसपटकको विश्वकप २०१८ मा जसरी केही ठूला टिम अनुपस्थित रहने छन्, त्यसरी नै केही ठूला नाम पनि देखिने छैनन् । यसपटकको विश्वकपले यी खेलाडीको प्रदर्शन गुमाउने छ । यी स्टार खेलाडी हुँदा हुन् त प्रतियोगिताको रौनक नै अर्कै हुने थियो । गेराथ बेल सन् २०१६ को युरोमा गेराथ बेलको वेल्सले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो, तर
आठ वर्षअघि कलेज पढ्दा बुटवलका सबिन र प्रविनाबीच प्रेम बस्यो । आफ्नी सपनाकी राजकुमारीसँग प्रेममा बाँधिएपछि सबिन परिवारलाई जानकारी गराउन हतारिए । प्रविनालाई परिवारसँग चिनजान गराउन उनले गुल्मीबाट बुबाआमा पाल्पा बोलाए, बुटवलबाट प्रविनालाई लिएर आफू पाल्पा हान्निए । तानसेनस्थित एक कटेजमा बुवाआमा, सबिन र प्रविनाबीच लन्चसहित कुराकानी भयो । प्रमिलाले केही वर्षमा विवाह गर्ने योजना